Donak’afon’ny tanora andiany fahaefatra nokarakarain’ny FES sy ny YLTP teny amin’ny « Le Pavé Antaninarenina » – Sénat de Madagascar
Donak’afon’ny tanora andiany fahaefatra nokarakarain’ny FES sy ny YLTP teny amin’ny « Le Pavé Antaninarenina »
May 25, 2019 Michel Hervey ANDRIANIRINA
Manoloana ny resabe ankehitriny amin’ny fanafoanana ny Antenimierandoholona dia nanatontosa ny andiany faha efatra amin’ny Donak’afon’ny tanora ny Friedrich Ebert Stiftung (FES) sy ny YLTP izay notanterahina teny amin’ny Le Pavé Antaninarenina ny zoma 24 may 2019.
Nosafidin’izy ireo manokana ny lohahevitra ” lalana tsy maintsy hizorana tokoa ve ny fanafoanana ny rafitrin’ny Antenimiera” izay nanasan’izy ireo ny Loholon’i Madagasikara RAKOTOVAZAHA Olivier sady Sekretera no Filoha nasionaly ny MFM, Laurent RAMAROSON mpandrindra nasionalin’ny Malagasy Miara-Miainga, Olivia RAJERISON mpisolovava ary Faraniaina RAMAROSAONA tompon’andraikitra amin’ny sehatra fanaraha-maso ny kolikoly.
Nifantoka tamin’ny fanehoan-kevitra mahakasika ny ilana na tsia ny fanafoanana ny Antenimierandoholona sy ny hasin’ny Antemiera amin’ny ankapobeny izay niarahan’ireo vahiny nasaina sy ireo tanora marobe tonga nanatrika ity donak’afo andihany faha 4 ity ny fotoana. Nafana dia nafana tokoa ny adihevitra nandritr’izany satria mahakasika ny raharaham-pirenena miseho ankehitriny tokoa ny lohahevitra nodinihina tamin’izany.
Nohamafisin’ny Loholona Olivier RAKOTOVAZAHA nandritra ny fandraisam-pitenenany fa mbola maro ireo malagasy no tsy mahalala ny anjara andraikitrin’ny Loholona ka lasa mitsara be fahatany ny antom-pisiny, anisan’ny maha tonga ny resabe ankehitriny amin’ny tokony hanafoanana azy ny hoe budgetivore ity Andrimpanjakana ity kanefa dia 0, 4 % any tetibolam-panjakana no entina manodina ity Andrimpanjakana, hanatanterahana ny andraikitr’izy ireo eny ifotony. Nambarany koa fa efa hatramin’ny taona 1959 no nisafidy ny bicamerisme ny vahoaka Malagasy izay mitaky ny fanajana ny fisaraham-pahefana sy ny tsy fijabahana amin’ny andraikitra sahanin’ny tsirairay.
Nohamafisiny ihany koa fa tsy ilaina izany fanovana rafitra izany satria endrika fanitsakitsahana ny Lalampanorenana mijoro izany. Tany Repoblikana i Madagasikara ka mila io Andrimpanjakana io, mba hisiany ny tena fitsinjaraham-pahefana marina antokin’ny demokrasia.
Nanohitra tanteraka izany anefa Andriamatoa Laurent RAMAROSON raha nandray fitenena satria tsy afaka ny hanatanteraka ny vinan’asa ao amin’ny IEM ny Fanjakana hoy izy raha tsy misy ny fitsinjaraham-pahefana tena izy na dia mitaky ny fanovana ny Lalampanorenana sy ny Repoblika aza izany. Kasain’ny Fanjakana atao io satria ilaina ny fanafohanana ny Antenimierandoholona.
Hiova tokoa ny fomba fijery amin’ io fanovana rafitra io hoy ihany izy, dinihina avokoa ny isan’ny mpiasam-panjakana isaky ny Antenimiera, hisy ny fanaovana sivana ireo olona atolotra atao Assistant Parlementaire sy ny fanomezana fiofanana ireo Solombavambahoaka. Nomarihany ihany koa fa ny Filankevitra Nasionaly ara-toekarena sy ara-tsosialy no tokony vatsiana ara-bola hanatanterahany ny asa eny ifotony .
Nandritra io fotoana io ihany koa no nilazan’ny solontenan’ny Fiaraha-monim-pirenena fa na dia nisy aza ny asa vitan’ireo Parlementera tamin’ny fandaniana ireo lalàna maromaro izay miantraika mivantana any amin’ny vahoaka dia mbola maro ihany ireo fanamby tsy tanteraka sy ireo lesoka izay tokony ho harenina raha tsy hilaza ny fisian’ny kolikoly eny amin’ny Antenimierampirenena sy ny tsy fahaizan’ny Parlemantera ny tena andraikiny. Nanolotra soso-kevitra anefa izy ireo amin’ ny mba hisian’ny vaomera mpanara-maso ny fomba fanatanterahan’ireo Parlemantera ny asany sy ny fanaovan’izy ireo ny tamberin’andraikitra amin’ny vahoaka. Ilaina koa hoy izy ireo ny fisian’ny Antenimierandolona mba hisian’ ny fitsinjaraham- pahefana tena izy izay maneho ny fisian’ny demokrasia eo amin’ny Firenena iray.